WBOn Giddu galeessaa loltoota haarawa eebbisiisuu beeksise!! – Kichuu
HomeNewsAfricaWBOn Giddu galeessaa loltoota haarawa eebbisiisuu beeksise!!
WBOn Giddu galeessaa loltoota haarawa eebbisiisuu beeksise
KMN:- September 15/2021
የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት መዓከላዊ ዞን ሲያሰለጥናቸዉ የቆዩትን ብዛት ያላቸዉ አዳዲስ የሰራዊቱ አባላትን መስከረም 14/2021ማስመረቁን አስታወቀ።
Waraana bilisummaa Oromootti koonyaan Tuulamaa ykn Giddu galeessa Oromiyaa kaleessa gaafa fulbaana 14/2021 loltoota haarawa baatiwwaniif leenjisaa ture Ebbisiisuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Cunqursaa Oromoorra gahu qolachuu fi hiree ofii ofiin muryeeffachuu Ummata Oromoo kabachiisuf qabsoo hadhooftuu gochaa turuun isaa ni yaadatama.
Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo baatii tokkoo Oliif duula walii galaa kallattii afraniinuu sirna Impaayera Itiyoophiyaa bulchaa jiru irratti banee maqaa hooggantoota buleeyyii WBO duraanitiin moggaasee geggeessaa akka jiru gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Bifa addaatin baatii tokkoo oliif waraana ofirraa qolachuutirraa gara diina haleelutti kan seene WBOn Oromiyaa magaalotaa fi aanawwan hedduu bilisa baasaa akka tures gabaasaa tureera. Ammas gabaasni suuraadhaan dabaalamee nu qaqqabeen “Loltoonni amma leenji’anii duulaaf qophaan kunneenis itti fufiinsa qabsoo kanaatif gahee leencaa akka taphatan” dhaamameera.
Oromiyaa: A new army has graduated.
KMN :- September 15/2021
The Oromo Liberation Army has announced that the number of members of the military that were trained in September 14/2021 The Oromo Liberation Army has shown us that they have been inaugurated to protect the lives of the Oromo people and have not trained for eight months.
It has been announced that the Oromo Liberation Army has been transferred from the first four directions in the name of the previous fighters.
Koreen Giddu galeessaa ODP dhimma haaromsaa ilaalchisee ..
Koreen Giddu galeessaa ODP dhimma haaromsaa ilaalchisee irra deebi'ee kallattii ifa tahe tokko kaa'uu qaba…
Abiy 4kilo bahu wbon Dangaa cufu shagar wbon qabamu TPLF fi Nafxanya
ODUU Hatattama Abiy 4kilo bahu wbon Dangaa cufu shagar wbon qabamu TPLF fi Nafxanya Moha…
Ethiopian Armageddon: The siege of Dessie